Top 5 Fiaran-dalamby be any Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Fiaran-dalamby be any Eoropa
Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby no fomba fahita indrindra mandeha any Eoropa. Ary noho izany, ny sasany amin'ireo fiaran-dalamby mampihomehy indrindra eto ambonin'ny tany dia any Eropa ary indraindray, eto amin'izao tontolo izao.
Na eo aza ny hoe be olona amin'ny ora tendrony, ny ambony 5 Ny garan-dalamby be mpiorina any Eropa dia natao hanomezana izay mety ilainao amin'ny fitsangatsanganana.
Araho ny dianay mankany Eropa ary fantaro hoe misy ny fiaran-dalamby ao an-trano indrindra. Ianao dia efa ho hitanao hoe aiza no ahafahanao mihaino an'i Vivaldi sy amin'ny gara misy ny fiaran-dalanao azonao andrasana eo amoron'ny renirano ianao rehefa miala amin'ny lamasinina mankany Italia ianao.
1. Gare Du Nord Fiaran-dalamby, Paris
Gare du Nord any Paris (Ny teny gare teny amin'ny teny frantsay dia ny gara, Avaratra ao amin'ny frantsay ny avaratra) no fiaran-dalamby be indrindra any Eropa. Akaikikaiky 700,000 mpandeha izay mandalo ny gara isan'andro. Ny gara dia eo akaikin'ny 10faha arrondissement any Avaratr'i Paris, hany ka Paris ny ankamaroan'ny mpandeha. ihany 3% amin'ireo mpandeha fiaran-dalamby dia mpizahatany izay tonga na mankany Angletera Eurostar fiaran-dalamby.
Ny fiaran-dalamby indrindra eto Eoropa dia naorina 3 taona, eo 1861 ary 1864. Ny maritrano-marika 9 sarivongana mahavariana izay manaingo ny gara ao anatiny sy 23 sarivongana manao haingon-trano eo amin'ny efijery. Ireo sarivongana dia maneho ny tanàn-dehibe Eropeana izay mampifandray ny Paris amin'ny lamasinina.
Ny seranam-piaramanidina mahatalanjona dia nitarina indroa nandritry ny taona maro ary nanantena ny hiitatra indray noho ny fitomboan'ireo mpandeha sy ireo lalamby.
Paris-Nord no gara amin'ny lamasinina hivezivezena any avaratr'i Frantsa sy ny toerana misy azy, ohatra, Alemaina, London, ary Amsterdam. Noho izany, ity seranam-piaramanidina be mpampiasa ity dia hanome anao ireo làlana ilaina amin'ny dia rehetra ho anao fialantsasatra any Frantsa. Misy ny fivarotana, ivom-baovao momba ny fizahantany, fivarotana kafe, sy ny mpanidy kitapo raha te handinika tsara an'i Paris ianao mandritra ny ora vitsivitsy alohan'ny hiaingan'ny lamasinina.
2. Toby foiben'i Hamburg, Alemaina
Mihoatra ny 500,000 mpandeha nandalo tao Hamburg Hbf (Hbf dia aby fohy an'i Hauptbahnhof izay mandika amin'ny biraon'ny foibe) gara any Alemaina. Noho izany, Io no fiaran-dalamby be faharoa ao Eropa.
Nisy ny lamasinina naorina tao 4 taona sy ny arisialy Heinrich Reinhardt ary Georg Subenguth no namolavola azy. Nisokatra ny gara 1906 ary ao 1991 toeram-barotra iray no niampy ny tetezana avaratra, izay misy trano fisakafoanana, kiosks, fivarotam-panafody, ary ivon'ny serivisy.
Raha mikasa ny fiaran-dalamby Tsidika mankany Alemana, nahafinaritra ny mozika klasika. Noho izany, mandritra ianao miantsena amin'ny souvenir farany amin'ny farany, fivelomana tena ilaina, ary nitady haran-kanina hihinana, dia miarahaba anao indrindra ianao ary mankafy ny Vivaldi's Four Seasons.
3. Zurich HB Central Railway, Soisa
Ny toby fiaran-dalamby lehibe indrindra any Soisa dia any Zurich. Ny Zurich HB (HB dia toa an'i Hbf ary midika hoe Hauptbahnhof = Central Station) Ny gara no fiaran-dalamby no anisan'ny gara be indrindra any Eropa. Ny gara any Soisa izay sahirana dia mampifandray an'i Soisa amin'ny tanàna manerana ny firenena sy amin'ireo firenena manodidina. Misy 13 sehatra ary 2,915 Nandeha Alemana ny lamasinina, Italia, Frantsa, ary Aotrisy isan'andro. Ary noho izany, ny garan-dalamby Zurich dia iray amin'ny gara be mpandeha ambony indrindra manerantany.
Ny zavatra iray hafa mahatonga ity gara ity amin'ny fiaran-dalamby no mahaliana indrindra any Eropa dia ny fisian'ny fihantsiana fotsiny & tanànan'ny tanàna be olona. Ohatra, arakaraka ny ora fitsangatsanganana, afaka nataonao mankafy ny tsena krismasy and street parades.
Ny gara Zurich dia eo amin'ny Old Old of Zurich no misy azy. The Renirano Sihl mandalo ao amin'ny station, izany dia midika fa misy lalamby lalamby etsy ambony sy eo ambany izany.
koa, ny garan-dalamby Zurich mampifandray an'i Soisa amin'i Frantsa, Alemaina, Italia, Repoblika Tcheky, ary Aotrisy.
Toy izany koa ireo fiaran-dalamby hafa amin'ny lisitra, misy birao fifanakalozana, birao tapakila, fitahirizana entana, foibem-pahalalana momba ny fizahantany, ary Internet-Wi-Fi ao amin'ny gara Zurich. Noho izany, raha tsy adinonao ny manangona zavatra ho anao fialan-tsasatra any Suisse, tsy misy ahiahy satria eo amin'ny garano no ahitanao ny zavatra rehetra.
4. Fiaran-dalamby any Roma Termini, Italia
Ny garan-dalamby ao Roma dia manana ny tampony indrindra 5 Lisitry ny fiaran-dalamby indrindra any Eoropa lisitra noho ny isan'ny isan'ireo mpandeha ao aminy. Hatramin'ny 150 mpandeha an-tapitrisany maro no tonga ary miala amin'ny gara mpitatitra izay sahirana isan-taona.
Ny gara ao Roma dia mampifandray an'i Roma Termini amin'ny tanàna hafa any Italia amin'ny alàlan'ny Trenitalia. Ankoatry ny, ny gara dia mampifandray an'i Italia amin'ny firenena mifanila aminy 29 sehatra. Ohatra, avy any Roma Termini, afaka mandehandeha any Genève ianao any Suisse, Munich any Alemaina, ary Vienna tany Aotrisy.
Ny garan-dalamby any Roma dia manana ny zavatra rehetra ilain'ny mpivahiny amin'ny fiaran-dalamby any Europe na Italia. Ary noho izany, tao amin'ny efitrano fidirana, dia hahita birao fifanakalozana fifanakalozana vola ianao, trano fisakafoanana, serivisy taxi-be, ary fampirimana entana. Ny zavatra rehetra dia nalamina ary natao hahavitana ny dianao amin'ny dia mandeha tsara.
5. Fiaran-dalamby in Munich Hauptbahnhof, Alemaina
Ankehitriny dia misy 32 lampihazo any amin'ny iray amin'ireo fiaran-dalamby be any Eoropa. Ankoatry ny, misy serivisy fiaran-dalamby InterCity sy EuroCity ho an'ny ankamaroan'i Alemaina, ary Italia, Frantsa, Soisa, ary Aotrisy. Avy amin'ny gara Munchen Hauptbahnhof dia afaka mandeha any Berlin, Frankfurt, Vienna tany Alemana na nitondra fiaran-dalamby tany Venice sy Roma tany Italia, Paris, ary Zurich.
Around 127 mpandeha tapitrisa no mitsidika ny gara Munich isan-taona. This outstanding number makes the station one of the busiest train stations in Europe.
Toy izany koa ireo fiaran-dalamby hafa voalaza etsy ambony, ny seranam-piaramanidina Munich dia manolotra tolotra sy serivisy maro ho an'ny mpandeha. Ohatra, afaka mahita fivarotana sakafo ianao, fivarotana fanomezana ary na dia ankizy iray aza & tranom-bakoka tanora ao amin'ny gara.
Ivelan'ny trano fiantsonana, ho hitanao ny metro ambanin'ny tany U-Bahn, serivisy taxi-be, ary làlam-by tram izay hitondra anao any amin'ny Munich rehetra.
Na mitady fiaran-dalamby na iraisam-pirenena ianao raha hitety an'i Eropa, asio ny tapakilan'ny lamasininao Save A Train. Ho faly izahay hanampy anao hahita ireo safidy tsara indrindra azo vidina amin'ny vidiny mora indrindra.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Top 5 Fiaran-dalamby be any Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/busiest-train-stations-europe/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)